बिचित्र – PathivaraOnline
Home > बिचित्र
admin September 26, 2020 जीवनशैली, बिचित्र, रोचक, समाज	0
एजेन्सी । विश्वमा हरेक दिन नयाँ र अनौठा घटनाहरु भइरहेका हुन्छन् । अहिले बाहिर आएको समाचार भारत बिहार राज्यको हो । जगदीशपुर पुलिस क्षेत्र यहाँ छ । यहाँ एक महिला गर्भवती हुने बित्तिकै बबाल भएको छ । महिलाको नन्द यस सम्बन्धमा डीआईजी पुगेकी थिईन् । अब तपाई सोच्दै हुनुहुन्छ, के
एजेन्सी- मानिसहरुले विभिन्न प्रथा तथा प्रचलन चलाएको पाइन्छ । कुनै पनि बालबालिकाको विवाह कुकुरसँग गराइन्छ भन्ने सुन्दा तपाइँलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । तर अझै यस्तो प्रचलन रहेको पाइएको छ । भारतको जमशेदपुरस्थित आदिवासीहरुको बाहुल्य रहेको आदित्यपूर गाउँमा एउटा अन्धविश्वासको परम्परा अझैसम्म पनि कायम छ । गाउँमा यदि कुनै पनि बच्चाको पहिले
काठमाडौ । निजगढ नगरपालिकाको ग्रामिण भेगमा रहेको एक स्वास्थ्यकचौकीमा कार्यरत प्रमोद शाह, (स्वास्थ्य सहायक) ले उपचारका लागि स्वास्थ्य चौकी आएकी महिलालाई गलत काम गरेका कारण अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढले पक्राउ गरी घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ । एक जना महिला गर्भवती थिइन् । तर उनको बच्चा खेर
एक महिला ३२ वर्षदेखि सामान्य जीवन बाँचिरहेकी थिइन् । उनको विवाह भएको ९ वर्ष बितिसकेको थियो र वैवाहिक जीवन पनि राम्रो चलिरहेको थियो तर अचानक उनलाई थाहा भयो कि उनी एक पुरुष हुन् र उनलाई टेस्टिक्यूलर क्यान्सर छ । भारतको पश्चिम बंगालमा बीरभूममा बस्ने यी महिला शारीरिक रुपमा त महिला
admin September 9, 2020 बिचित्र, याैनशिक्षा, रोचक	0
श्रीमतिहरु अर्कैको श्रीमानसंग किन नजिक हुन्छन त जब आफ्नो श्रीमान हुँदाहुँदै अरु कै श्रीमान संग सल्किने गरेको देख्न पाइन्छ बिसेष गरि पछिल्लो समय श्रीमान हरु विदेशमा भएका श्रीमतिहरु अरु पुरुषहरुसंग स ल्किएको देख्न र सुन्न पाइन्छ सबैलाइ त्यसो भन्न मिल्दैन तर खासगरी श्रीमान विदेश हुने महिला हरु अर्कै पुरुष संग
सुशान्त निधनकाे बलिउडमा भयो यस्तो पर्दाफास, ४५ मिनेट मुर्दाघरमा बसेकि रियालाइ सन्दिप सिंहले दिए थम्स अप (भिडियो हेर्नुस्)
admin August 22, 2020 August 22, 2020 बिचित्र, भिडियो, समाज	0
काठमाडौ । सुशान्त सिंह राजपुतको निधन भएको दुई महिना पुगेको छ । तर उनको निधनका विषयमा बल्ल केही पाटा खुल्न थालेका छन् । अहिले उनको घटनासंग सम्बन्धित महत्वपुर्ण भिडियो सार्वजनिक भएका छन् । जसमा उनको प्रेमिका भनिएकी रिया चर्कवर्ती र फिल्म निर्माता संदीप सिंहको शंकास्पद गतिविधि देखिएको छ । भिडियो
साउनकाे महिनामा माछा पाइनु ठुलो कुरा होइन तर आकाशबाटै माछा खस्नु?? अचम्म! (भिडियोमै हेर्नुस्)
admin July 19, 2020 July 19, 2020 बिचित्र, भिडियो, रोचक	0
एजेन्सी । यदाकदा हामीले आका’शबाट माछा वर्षिएको समाचार सुनेका छौं । हावाको चाप कम भएको स्थानमा बढी चाप भएको क्षेत्रबा’ट तीव्र गतिले हावा बहन्छ । तीव्र गतिले हावा ब’ढ्दै जाँदा दायाँ बायाँ र अगाडिबाट आइरहेको त्यस्तै शक्तिशाली हावासँग ठोकिएर फर्कन खोज्छ । यसरी विपरीत दिशाबाट आएका हावाले जोड’सँग धकेल्दा उक्त
admin July 17, 2020 July 17, 2020 जीवनशैली, बिचित्र, रोचक	0
एजेन्सी । एक १९ वर्षकी किशोरीले दावी गरेकी छिन् कि जब उनी रातमा एक युवकको कोठामा गइन् त्यही बेला अचानक युवकका अन्य ११ जना साथीहरु आए र सबैले करणी गरे । घटना साइप्रसको हो,जहाँ बेलायती कशोरी एक सस्तो रिसोर्टमा बसेकी थिइन् । किशोरीले आफू एक युवकसँग कोठामा भएको स्वीकार गरेकी छिन् ।किशोरीको
admin July 10, 2020 बिचित्र, समाचार, स्वास्थ्य	0
एजेन्सी । भारत यस्तो देश हो जहाँ दैनिक दुनियाँलाई अचम्मित पार्ने घटनाहरू सार्वजनिक भइरहन्छन् । महिला गर्भवती हुनु त सामान्य नै हो । केही पुरुषहरू पनि लिंग परिवर्तन गरेर गर्भवती हुने कुरा पनि खासै नौलो होइन । तर भारतको उत्तर प्रदेशमा एक युवक नै गर्भवती भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको खबर
admin July 8, 2020 July 8, 2020 बिचित्र, भिडियो, रोचक	0
कुकुर एक घर पालुवा स्तनधारी जनावर हो । घरको सुरक्षाका लागि पालिने कुकुरलाई स्वामी भक्त प्राणीको रूपमा लिइन्छ र यो मानिसहरूसँग अत्यन्त मिलेर बस्न सक्दछ ।कुकुराको सुन्ने र सुँघ्ने शक्ति अत्यन्त तिक्ष्ण हुन्छ । घरको रेखदेखको लागि पालिने कुकुर मानिसहरूले शोखका लागि पनि पाल्ने गर्छन् । शिकार गर्न सहयोग गर्ने